Mibvunzo - FAQ - Anhui Lihua Wood Composite Co., Ltd.
Q1: Zvigadzirwa zvako zveWPC zvinogona kuva neye logo yevatengi here?
A: Ehe, kana mutengi akatipa logo yavo, tinogona kuisa iyo logo pamapakeji ezvigadzirwa kana kuipurinda pane izvo zvigadzirwa izvo zvakakosha!
Q2: Inguva yakareba sei iwe kuti kugadzira chakuvhuvhu itsva zvigadzirwa zvitsva?
A: Kazhinji, isu tinoda mazuva gumi nemashanu kusvika makumi maviri neshanu kuti tiite chakuvhuvhu chitsva, kana paine mutsauko, mazuva mashanu kusvika mashanu anofanirwa kuita madiki ekugadzirisa.
Q3: Ko mutengi anodikanwa kubhadhara iyo fosi yeiyo nyowani furu? Zvakawanda sei? Tichazodzosera mari iyi? Inguva yakareba sei?
A: Kana mutengi achida kugadzira chakuvhuvhu chitsva, hongu vanofanirwa kubhadhara mubhadharo weforoma kutanga, ichave iri $ 2300- $ 2800. Uye isu tichazodzosera mari iyi kana mutengi aisa maodha mana e20GP mudziyo.
Q4: Ndeipi chikamu chezvinhu zvako zveWPC? Ndezvipi zvacho?
A: Zvigadzirwa zvedu zveWPC zvikamu zviri 30% HDPE + 60% Wood Fibers + 10% Chemical Additives.
Q5: Unotora nguva yakareba sei kugadzirisa zvigadzirwa zvako?
A: Tichagadzirisa zvigadzirwa zvedu mwedzi wega.
Q6: Ndeipi dhizaini yekugadzirwa kwako kwechigadzirwa? Ndezvipi zvakanakira?
A: Zvigadzirwa zvedu zvakagadzirwa pane kugona kwehupenyu, senge anti-slip, mamiriro ekunze asingagone, anti-kupera, nezvimwe.
Q7: Ndeapi mutsauko wezvigadzirwa zvako pakati pevezera rako?
A: Zvigadzirwa zvedu zveWPC zviri kushandisa zvirinani uye zvitsva zvinhu, saka mhando iri nani uye mukana wehunyanzvi, mutengo wedu wakanaka kwazvo.
Q8: Ndivanaani vako veR & D vashandi? Ndezvipi zvinodiwa?
A: Tine timu yeR & D, vese vane ruzivo rwakazara muavhareji, vakashanda munzvimbo ino kweanopfuura makore gumi!
Q9: Chii chinonzi chigadzirwa chako R & D zano?
A: Yedu R & D pfungwa ndeyezvakatipoteredza zvine hushamwari, yakaderera kugadzirisa, hupenyu hwakareba uchishandisa uye mhando yepamusoro.
Q10: Ndeapi ehunyanzvi magadzirirwo ezvigadzirwa zvako? Kana zvirizvo, ndeapi iwo chaiwo?
A: Hwedu hwehunyanzvi magadzirirwo akaenzana saizi, michina chivakwa, Anti-pitikoti kuita, Isina mvura kuita, Mamiriro ekunze kugona, nezvimwe.
Q11: Ndeupi rudzi rwechitupa iwe wawakapfuura?
Q12: Ndeupi rudzi rwechitupa iwe wawakapfuura?
Q13: Ndeapi vatengi iwe iwe wakapfuura iyo fekitori yekuongorora?
Q14: Chii chako chekutenga system senge?
Q15: Ndeupi muyero wevatengesi vekambani yako?
Q16: yakareba sei wako chakuvhuvhu kushanda zvakajairika? Nzira yekuchengetedza sei zuva nezuva? Ndeapi masimba eimwe neimwe seti yeanofa?
Q17: Ndeipi yako yekugadzira maitiro?
Q18: Inguvai yakajairwa nguva yekuendesa yezvigadzirwa zvako?
Q19: Iwe unayo mashoma odha huwandu? Kana zvirizvo, chii chiri chidiki odha huwandu?
Q20: Ndeapi ako akazara chinzvimbo?
Q21: Yakakura sei kambani yako? Ndeipi iyo inobuda pagore kukosha?
Q22: Ndeapi midziyo yekuyedza iwe yaunayo?
Q23: Chii chako mhando maitiro?
Q24: Chii chinonzi chigadzirwa chako? Zvakawanikwa sei?
Q25: Inguva yakareba sei basa rehupenyu hweWPC zvigadzirwa?
Q26: Ndeipi nguva yekubhadhara yaunogamuchira?
Q27: Kufananidza nehuni, ndezvipi zvakanakira WPC zvigadzirwa?
Q28: Zvigadzirwa zveWPC zvinoda kupenda here? Ndeupi ruvara iwe waunogona kupa?
A: Sezvo mutsauko nehuni, zvigadzirwa zveWPC pachezvazvo zvine ruvara, zvinoda imwe pendi. Kazhinji, isu tinopa 8 makuru mavara seCedar, yero, tsvuku pini, tsvuku huni, shava, kofi, grey grey, bhuruu grey. Uye zvakare, tinogona kuita rakakosha ruvara pane chako chikumbiro.
WPC decking uriri, WPC rinoumba decking, huni mapurasitiki ematongerwo decking, WPC yekunze decking, WPC uriri, Kunze WPC decking,